मसंग कुनै स्लोगन छैन तर गुन्डागर्दी जराबाट नै उखल्ने होः काठमाण्डौ प्रहरी प्रमुख जोशी | KTM Khabar
२०७३ माघ २० गते २०:५६ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । देशै भरिका मान्छेहरुको सपनाको शहर हो काठमाण्डौ । राम्रा नराम्रा सबै मान्छेहरु यो शहरमा बस्ने गर्छन । शान्ति, शुरक्षा अमनचयनमा नेपाल प्रहरीको ठुलो भुमिका रहने गर्दछ । भर्खर मात्रै सरकारले नेपाल प्रहरी परिसर काठमाण्डौ प्रमुखको जिम्वेबारी वरिष्ठ प्रहरि उपरिक्षक (एसएसपी) छविलाल जोशीलाई दिएको छ । शंखरदेव क्याम्पसबाट एमविए गरेका जोसि २८ बर्ष देखि लगातार नेपाल प्रहरीमा रहेर जनताको सुरक्षामा खटिईरहेका छन । उनै जोशीसंग केटिएम खबर डट कमका लागि रवि भट्टराईले गरेको विशेष भिडियो संवादको सम्पादित अंशः
यहाँलाई स्वागत छ, आराम हुनुन्छ ?
धन्यवाद, आरामै छु ।
तपाई काठमाण्डौ प्रहरी प्रमुख बन्नु भएछ नी ?
हो, म काठमाण्डौ प्रहरी प्रमुख भएको छु । नेपाल सरकारले र नेपाल प्रहरीले मलाई बिश्वास गरेर यो महत्वपुर्ण जिम्वेवारी दिएको छ ।
तपाईको जन्म कहाँ भयो ?
म अर्घखाचीको अर्घातोस गाऊँमा जन्मेको हुँ । मेरो बाल्यकाल अर्घखाचि मै बित्यो, मैले पढाईको क्रममा मेघालयमा बिकम अनर्ससम्म गरे । त्यसपछि शंखरदेब क्याम्पसबाट एमबिए गरेको छु ।
बाल्यकाल कस्तो गरी बित्यो, कस्तो परिवारको मान्छे हो तपाई ?
मेरो परिवारमा सबैले बन्झाडे लेख्नुहुन्छ । म बन्झाडे परिवारको हुँ । मेरो परिवार कानुनसंग अलिक नजिक छ । शिक्षित नै परिवारको हुँ । मध्यम बर्गिय परिवार, खेती किसानी गर्ने परिवार कै मान्छे हुँ ।
गाऊमा जति नै भए पनी यहाँको स्तर हेर्नुहुन्छ भने धेरै त हैन त्यहाको हिसाबमा हामीलाई सहजै थियो ।
प्रहरीमा आउने संयोग थियो या रहरले लाग्नु भयो ?
मेरो नेचर प्रहरीमा मिल्दोजुल्दो भएर नै म नेपाल प्रहरीमा लागे । वास्तबमा मलाई सुहाउने पेशा नै यहि थियो भन्ने लाग्छ ।
देख्दा त सामान्य देखिनु हुन्छ नी ? प्रहरी भन्ने वित्तिकै कडा स्वभाव, आम जनता भन्दा कडा मिजास भएको हुन्छन भन्ने बुझाई छ नि ?
पहिला तपाईले भने जस्तै प्रहरीमा जाने मान्छेलाई भिन्नै तवरबाट हेरिने गरिन्थ्यो । तर अहिले त्यस्तो रहेन अहिले प्रहरीमा हरेक शिक्षित, मृदुभाशि र चलाख प्रहरी अफिसरहरु हाम्रो संगठनमा छन । अहिले नयाँ आऊने साथीहरु एकदमै राम्रो पढेको हुनुहुन्छ । त्यसैले नियमको पालना गर्ने गराउने हाम्रो दायित्व हो । ब्यक्तित्व त बाहिरी देखिने न हो ।
काठमाण्डौ प्रहरी प्रमुखले गरेका कामलाई देशभरीबाट हेरिन्छ, कस्ता योजनाहरु छन तपाईसंग ?
यसरी बुजि दिनु पर्यो म काठमाण्डौ प्रहरीका लागि मात्र नयाँ हुँ तर नेपाल प्रहरीमा २८ बर्ष अनबरत खटेर काम गरेको मान्छे हुँ । त्यसैले यताकता नयाँ नामै नसुनेको भन्ने गरिन्छ तर त्यस्तो हैन । म विभिन्न ठाँऊमा विभिन्न जिल्लामा आफ्नो भुमिका देखाई सकेको ब्यक्ति हुँ । त्यसैले प्रहरीले निभाउनदु पर्ने भुमिकामा म आईसकेपछि कुनै कमि हुन दिने छैन बरु अझ सशक्त बनाएर लैजाने हो । म मात्र हैन मेरो नतृत्वमा मेरो सम्पुर्ण टिम छ र हामी शान्ति सुरक्षा र अमन चयनमा खटिने छौ ।
यो कुर्सिमा जति आउनु भयो उहाँहरु संञ्चार माध्यमदेखि आफ्ना काममा पनि अब्बल देखिनु भयो तर तपाई चाँहि कमजोर हो भन्नेहरु पनि छन नी ?
मैले समाचारहरु हेरेको छु । पढेको पनि छु । वास्तबमा मेरो विषयमा थोरै भ्रम जस्तोे आम जनमानसमा नचिनिएको भन्ने एक खालको वाताबरण छ तर उहाँहरुलाई पनि मेरो धन्यवाद छ । मेरो विषयमा जे जस्तो टिप्पनी गर्नु भएको छ । म काठमाण्डौमा नयाँ प्रमुख भएर आएको हुँ । नेपाल प्रहरीमा २८ वर्ष देखि अनवरत रुपमा विभिन्न जिल्लामा सेवा गरेको छु । मैले काम गरि सकेपछि टिप्पनी गर्न पाईन्थ्यो तर आउन नपाउँदै टिप्पनी गर्दा चाहिँ मैले यत्रो २८ वर्षसम्म काम गरिन त, के गरेर बसे त ? अवश्य पनि मैले विभिन्न जिल्लाम बसेर राम्रा कामहरु गरेको छु । ती कुराको मुल्याङ्कन खै । त्यसै एकहोरो नचिनेको मान्छे भनेर हुन्छ ? हुनत गुनोसो छैन, मेरो बारेमा कमसेकम चर्चा भएको छ । म काम गरेर देखाउने मान्छे कामलाई नै विशेष जोड दिने हो ।
जनतालाई बताई दिनु होस तपाई कहिलेबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्नु भयो अनि कहाँ कहाँ सेवा गर्नु भयो ?
म २०४५ सालमा नेपाल प्रहरी निरिक्षक पदमा फ्रि कम्पिडिसन गरेर सेवामा प्रवेश गरे । त्यसपछि कमलपोखरी वडा प्रहरी कर्यालयमा ईन्चार्ज भएर बसे । त्यसपछि दरबारमा एडिसि पनि बसे । त्यसपछि रोल्पा गए त्यहाँबाट मेरो प्रमोशन डिएसपीमा भयो । त्यसपछि मैले जिल्ला प्रहरी कार्यलय वझाङको नेतृत्व गरे । त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यलय पर्वत आए, त्यसपछि पाल्पामा अएपछि एसपीमा बढुवा भए । मैले विभिन्न जिल्लामा काम गरेर देखाएको छु ।
राजधानीमा गुण्डा, राजनितिज्ञ अनि प्रहरीमा केही सम्बन्धहरु छन् त्यसैको आडमा कानुन मिचिन्छ भन्ने गरिन्छ नी ?
यो राजधानी हो । यहाँ तपाईले भनेजस्तै राम्रा पनि छन् र नराम्रा पनि छन् र ती नराम्रा तत्वहरुलाई छानेर कानुनी कारबाहीमा ल्याउने नै हो । अहिले हामी अध्यन गर्दै छौ र कसरी अगाडी बढ्ने विषयमा सुष्म अध्यन गरेर अगाडि बढ्ने र फटाहालाई कानुनी दायरामा त ल्याउने नै हो ।
राजधानीमा गुण्डागर्दि छ यसमा शंखा छैन तर तिनीहरुलाई कसरी तहलगाउनु हुन्छ नी ?
अब हेर्नुहोस, अगाडिको चोर अहिले सुध्रिएको हुन सक्छ त्यसलाई सुध्रने मौका दिनु पर्यो तर यहाँ एक जना ब्यक्तिले यो गर्छु त्यो गर्छु भन्नु भन्दा पनि समग्र टिम छ मसंग र त्यो टिमको नेतृत्व मैले गर्दैछु । मसंग कुनै क्याच्ची स्लोगन छैन तर कानुनको पालना गर्नु गराउनु नै मेरो कर्तब्य हो । ब्यक्ति एक्लैले सबै काम गर्छु भनेर हुँदैन । मेरो भुमिका कानुनको पक्षमा हुनेछ । प्रहरीले निभाउने भुमिकामा कुनै कमजोरी हुन दिने छैन ।
राजनैतिक खिचातानीबाट दिक्क भएका जनताले चाहने भनेको त काम हो । तपाई के गरेर देखाउनु हुन्छ ?
मैले भनि सके म कुनै स्लोगन लिएर आएको हैन, म जनताको पक्षमा काम गर्ने, शान्ति, सुरक्ष र अमनचयनमा नेतृत्वदायी भुमिका प्रदान गर्ने साथै गुण्डा गर्दी, चोरी डकैतीलाई लोकप्रियताका निमित्त यो गर्छु भन्दा पनि पुर्ण रुपमा नितिनियमहरु कार्यन्वयन गरेर यसलाई जरा देखि उखालेर फ्याक्ने हो । यसका निमित्त नेपाल प्रहरीको पुरा टिम नै लागि पर्ने छ ।
अन्त्यमा शान्ति, सुरक्षा र अमनचयनका लागि हामी दिन रात लागि रहेका छौ । म पनि पनि काठमाण्डौ प्रहरी प्रमुखमा आएपछि पनि मेरो भुमिका यसैका पक्षमा हुनेछ । मैले भनि सके कानुन तथा प्रहरीका निति तथा नियमको अक्षरस पालन गरेर अपराधलाई जरादेखि उखेलेर फ्याक्ने तर्फ मेरो ध्यान गएको छ । तपाईले अबका केही दिनमा नै यसको अनुभव गर्न पाउनु हुनेछ ।
समय र सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद
काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख छविलाल जोशीसंग गरिएको भिडियो संवाद हेर्न तलको लिङ्कमा जानुहोसः